पुरानो इतिहास दोहोराउदै टोपबहादुर रायमाझी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न भन्दै भारतलाई उपहार दिए तल्लो अरुण ? – Enepali Samchar
पुरानो इतिहास दोहोराउदै टोपबहादुर रायमाझी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न भन्दै भारतलाई उपहार दिए तल्लो अरुण ?
February 2, 2021 adminLeaveaComment on पुरानो इतिहास दोहोराउदै टोपबहादुर रायमाझी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न भन्दै भारतलाई उपहार दिए तल्लो अरुण ?
e nepalisamchaar/ काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशको भू-राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको बताएका छन्। शनिवार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री रायमाझीले यस्तो बताएका हुन्।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न दिने निर्णय भए पनि नेपालले त्यसबाट के कति सुविधा पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। जबकि, एसजेभिएनले नै निर्माण गर्ने ९ सय मेगावाटको अरुण-३ मा २१.९० प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने प्रावधान छ। सरकार टिकाउनकै लागि दुई छिमेकीलाई ठुला र महत्त्वपूर्ण आयोजना सुम्पिनु देशको ठुलो दुर्भाग्य हो।
विगतदेखि सत्ता केन्द्रित राजनीति टिकाउन ठूला आयोजना भारत वा चीनलाई बुझाउने खेल हुँदै आएका छन्।
श्रीस्वस्थानीमा पीएचडी गर्ने अमेरिकी जेसिकाले श्रीस्वस्थानीबारे खोलिन यस्तो राज !
माधव नेपालको अपमान ! प्रचण्डको भाषण नसुनी कार्यक्रम छोडेर यस्तो भन्दै निस्किए नेपाल
आफ्नै घरमा पालेको कुकुरको पिसाब किन पिउँछिन् यी युवती ?